များအတွက် Trailer MarvelHawkeye ၏အလားအလာသေးငယ်သောပုံကိုပြသည်
13 / 09 / 2021 13 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 140 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, ကလင် Barton, Disney+, Hawkeye, ကိတ်ဆရာတော်, Lego, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, နောကျတှဲရထား, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
လာမယ့်ပထမဆုံး trailer Marvel စတူဒီယို၏ Hawkeye စီးရီးသည်အလားအလာရှိသောအနာဂတ် minifigure အတွက် super-suit ဒီဇိုင်းကိုပြသသည်။
Marvel Studio's Hawkeye သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က WandaVision, The Falcon နှင့် Winter Soldier, Loki နှင့်လက်ရှိထုတ်လွှင့်ခဲ့သော What if ... ? ဤနာမည်ကြီးရှိုးများ၏ကြယ်ပွင့်အမွေအနှစ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် Hawkeye အဖြစ် Jeremy Renner နှင့် Kate Bishop အဖြစ် Hailee Steinfeld တို့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
ရုပ်ပြများတွင်ထိုနောက်ဆုံးဇာတ်ကောင်သည် Clint B ထံမှ Hawkeye အမှတ်လက္ခဏာကိုယူသည်artသူသည်သူ၏မိသားစုနှင့်ရိုးရှင်းသောဘ ၀ ကိုနေထိုင်ရန်အနားယူပြီးနောက်နောက်တွဲတွင်ပြသသောအရာနှင့်ဆင်တူသည်။ ဤကိစ္စသာဖြစ်သည်ဟုယူဆလျှင် Kate ဆရာတော်သည်အနာဂတ်၏အဓိကသော့ချက်ဖြစ်နိုင်သည် Marvel ထို့ကြောင့် Cinematic Universe သည်မလွှဲမရှောင်အနာဂတ်အနာဂတ်ပုံသဏ္ဌာန်အတွက်အကျုံးဝင်သည်။
ခရစ်စမတ်တွင်ကျင်းပသော Hawkeye သည် Clint B ထံမှရှိနေခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရန်ကြိုးစားသည့်ရဲရင့်သောနှစ်ယောက်ကိုပြလိမ့်မည်artအတိတ်မှာ၊ သူရဲကောင်းများအားလပ်ရက်များအတွက်သူ့မိသားစုကိုအိမ်ပြန်ခွင့်ပြုရန်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်၌ပါရမီရှင်တစ် ဦး ကိုလေ့ကျင့်ပေးခွင့်ပြုရန်အားလုံး။ Kate Bishop ၏စူပါဟီးရိုးဝတ်စုံသည်ခရမ်းရောင်အရောင်အစီအမံနှင့်လိုအပ်သောကျည်တောက်၊ လေးနှင့်အခြားအရာများကိုင်ဆောင်ရန်သားရေကြိုးများဖြင့်ကာတွန်းဒီဇိုင်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
Hawkeye ပြပွဲသည်နိုဝင်ဘာလ ၂၄ ရက်ဖြန့်ချိမည့်ရက်အတွက်အချိန်သတ်မှတ်ရန်လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိသောကြောင့်ကိတ်ဆရာတော် minifigure သည်အနာဂတ်တွင်ကတ်များပေါ်တွင်ရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့စောင့်ကြည့်ရပါမည်။ 71031 Marvel စတူဒီယို ၎င်းကိုစတင်ရန်ပထမဆုံး series လေးခုကိုသာကိုင်တွယ်သည် Disney+။ သို့သော်လည်းကိတ်သည်နောင်ရုပ်ရှင်များတွင် Hawkeye ၏အခန်းကဏ္ကိုလက်ခံလျှင် minifigure တစ်ခုသည်လုံး ၀ ရှောင်လွှဲ၍ မရပါ။ Lego Group မှ။
ဘာအရသာလဲဆိုတာ Lego အဖွဲ့လိုက်လုပ်နိုင်သည် Disney+ Marvel ဇာတ်ကောင်များ၊ minifigures ၁၂ ခုစလုံး 71031 Marvel စတူဒီယို (ပြန်လည်သုံးသပ်) နှင့် duo of အသစ်အစုံ ဘာအတွက်လဲ ... ? ၌ 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper နှင့် 76194 Tony Stark ၏ Sakaarian Iron Man.
← LEGO ကအတည်ပြုသည် Star Wars, Creator Expert 2021 ခုနှစ်တွင်အနားယူအစုံ
LEGO လေးတစ်ခုပါ Star Wars Imperial Star Destroyer GWP သည်ကောလဟာလသတင်းများဖြစ်သည် →